Home मनोरञ्जन ‘लिलिबिली’ खिच्न किन निर्देशक चाम्स युरोप पुगे ?
अघिल्लो हप्ता भारत भ्रमण गएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई ठूलै आशा देखाए । नेपाली चलचित्र उद्योगको विकासका लागि बलिउडसँग सहकार्य गरेर जानुपर्ने उनले बताए । आफ्नो भारत भ्रमणक्रा क्रममा भारतीय वरिष्ठ चलचित्रकर्मीसँग छलफल गर्ने भन्दै आफ्नो भ्रमण टोलीमा राजेश हमाल र दिनेश डिसीलाई पनि समावेश गरे ।
भ्रमणको दोस्रो दिन बलिउडका कलाकारसँग छलफल त राखियो । तर राजपाल यादवबाहेक नाम चलेका कलाकार कोही पनि आएनन् । प्रधानमन्त्रीको चाहना बलिउडका स्टार कलाकारको अनुपस्थितिका कारण अलपत्र पर्यो ।
प्रधानमन्त्री ओली भारतीय चलचित्रकर्मीलाई सुटिङका लागि नेपाल आउन आग्रह गर्दै बलिउडका बिग बजेटका चलचित्र नेपालमा खिचिए त्यसले पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने र नेपाली चलचित्र उद्योगसँग पनि जोडिने बताउँदै आएका थिए ।
तर उनले यस्तो सपना देखिरहँदा अधिकांश सिन युरोपमा खिचिएको चलचित्र ‘लिलिबिली’ का निर्देशक मिलन चाम्सले अलि फरक धारणा राखे । छायांकनका लागि ‘भर्जिन ल्याण्ड’ भनिएको नेपालमै लोकेशन छोडेर ‘लिलिबिली’ खिच्न किन निर्देशक चाम्स युरोप पुगे ?
सामान्य जवाफ छ उनीसँग, “लोकेशन त हामीसँग छ तर त्यहाँसम्म पुग्नका लागि बाटो छैन । सुटिङ गर्दागर्दै कोही घाइते भयो भने अस्पताल छैन, एम्बुलेन्स छैन । अनि कसरी गर्न सकिन्छ भनेजस्तो ठाउँमा सुटिङ ?”
यो त भयो पूर्वाधार अभावमा मनोरम ठाउँ हुँदाहुँदै छोड्नुपर्ने बाध्यता । अर्को तीतो अनुभव पनि छ निर्देशक चाम्ससँग । “मैले चलचित्र खिचिरहेका बेला रियल गुण्डा आएर मलाई धम्क्याएका छन्,” उनी भन्छन्, “यो मेरो एरियामा कसको अनुमति लिएर सुटिङ गर्न आइस् भनेर मार्ने धम्की दिएका छन् । प्रशासनसँग अनुमति लिएर सुटिङ सुरु गरेपछि फेरि डनसँग पनि अनुमति लिनुपर्ने अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामी विदेशीलाई नेपालमा चलचित्र खिच्न बोलाउने भनिरहेका छौं । यो कति सम्भव होला ?”
उनी नेपालमा भन्दा केही रकम बढी खर्च गर्दा युरोपमा चलचित्र खिच्न सकिने बताउँछन् ।
निर्देशक मिलन चाम्सले ‘लिलिबिली’ अंग्रेजी सिनेमा ‘ह्यारिपोर्टर’ खिचिएको ठाउँमा छायांकन गरिएको जनाएका छन् । लन्डन, स्कटल्याण्ड, टर्कीको स्तानबुलमा पुगेर चलचित्र छायांकन गरेका उनले भने, “हामीले चलचित्र लिलिबिली ह्यारिपोर्टर खिचेको ठाउँमा पुगेर खिचेका छौं । धेरैलाई विश्वास नलाग्न सक्छ । तर चलचित्र हेरेपछि थाहा पाउनुहुनेछ । अहिलेसम्म कनै पनि नेपाली सिनेमा नखिचेको ठाउँमा पुगेर लिलिबिली खिचेका छौं ।”
निर्देशक चाम्सले एक दिनको ३ लाख ७० हजारसम्म तिरेर चलचित्र छायांकन गरिएको स्पष्ट पारे । ठूलो क्यानभासमा चलचित्र खिच्ने तय भएपछि बजेटमा सम्झौता नगरेको उनको भनाइ छ । “यो चलचित्रको कथा दर्शकलाई मनपर्छ या पर्दैन त्यो मलाई थाहा छैन । तर चलचित्र उद्योगलाई केही टेवा भने यसले पक्कै पनि पुर्याउँछ,” निर्देशक चाम्स भन्छन्, “निष्कलंक मनले नेपाली चलचित्र उद्योगलाई केही दिऊँ भनेर लागेको छुु ।”
गफिँदै गर्दा उनी भावुक पनि भए, “दरबारमार्गमा मेरो अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डको कपडा सप थियो, राम्रोसँग चलिरहेको रेष्टुराँ थियो । त्यो सबै मैले त्यागेर चलचित्र उद्योगका लागि केही गर्न सकिन्छ कि भनेर लागेको हुँ ।”
‘लिलिबिली’ का नायक हुन्– प्रदीप खड्का । युरोपमा माइनस ९ डिग्री सेलिसियस तापक्रममा छायांकन गरिएको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, “चलचित्र सुटिङका क्रममा निकै कठिन भएको थियो । टेक लिँदा राम्रो नराम्रोभन्दा पनि चाँडो ओके भन्दिए हुन्थ्यो भन्ने लाग्थ्यो । तर अहिले चलचित्र हेर्दा निकै राम्रो चलचित्र बनेको छ । ३ सय रुपैयाँमा हिन्दी सिनेमा हेरिन्छ नेपाली चलचित्र किन हेर्नु भन्नेका लागि पनि यो चलचित्रले ३ सय रुपैयाँ असुल गर्छ ।”
उनले पहिला नेपाली चलचित्रलाई विश्वमा पुर्याउन सकेमात्रै नेपाल विश्वभरका चलचित्रका लागि सुटिङ हब बन्नसक्ने बताए । “पहिला हामी हाम्रो चलचित्रलाई स्तरीय देखाऔं, यही राम्रो चलचित्र बन्यो भने नेपालमा पनि सिनेमा खिच्ने ठाउँ भनेर सन्देश दिन सकिन्छ । अहिलेलाई हामी हामीसँग चलचित्र खिच्ने ठाउँ छ भनेर हिँड्नुभन्दा पनि स्तरिय चलचित्र बनाउनतर्फ केन्द्रित बनौं,” उनको भनाइ छ ।
चलचित्र कला भएको बताउने प्रदीप कलालाई पैसासँग तुलना गर्न रुचाउँदैनन् । “मलाई जीवन निर्वाह गर्नपनि पैसा चाहिन्छ । तर म यो कलासँग पैसालाई तुलना गर्न चाहन्न । मेरो पारिश्रमिक कतिभन्दा पनि मैले गरेको काम कस्तो छ भन्ने कुराले ठूलो अर्थ राख्छ,” उनी भन्छन् ।
निर्देशक चाम्सले ‘लिलिबिली’ विदेशमा गएर एक करोड बीमा गर्ने पहिलो चलचित्र भएको पनि बताए । “लण्डनमा महारानीको दरबार अगाडि सुटिङ गर्दा त्यहाँको प्रशासनले सुटिङका क्रममा त्यहाँको संरचनामा केही क्षति पुग्यो भने उक्त बीमाबाट पैसा कटाउँछ । त्यसैले अनिवार्य बिमा गर्नु पर्दोरहेछ,” उनले भने, “यो चलचित्र भारतीयले बनाएका भए २५ करोड भारतीय रुपैयाँ खर्चिन्थे । तर हामीले बजार सानो भएका कारण त्यति त खर्च गरेका छैनौं । तर निकै ठूलो बजेट लागेको छ । कति लाग्यो त्यो चलचित्रमा देखिन्छ ।”
चाम्सले जस्तै नायक प्रदीपले पनि कलालाई बजेटसँग तुलना गर्न नमिल्ने भन्दै पर्दामै दर्शकले चलचित्रको बजेट अनुमान लगाउन सक्ने बताए । प्रियंका कार्की, प्रदीप खड्का, जसिता गुरुङ र अनुपविक्रम शाहीको मुख्य भूमिकामा रहेको चलचित्र ‘लिलिबिली’ चैत ३० गते अल नेपाल रिलिज हुँदैछ ।
प्रजनन अधिकार सम्बन्धी क्षतिपूर्ति